कुनै पनि उमेरमा हरेक केटी सुन्दर र आकर्षक हेर्न चाहन्छ। बरु जवान महिलाले लामो र घोर कर्ल भएका छन् वा चाहे, उसले प्रकृति द्वारा पतला र छोटो कपाल छ भने, उनी हरेक दिन उनीहरूको विभिन्न कपालहरू बनाउँछिन्।
विशेष गरी यो स्कुलको अवधिमा चिन्ता छ, यस शैक्षिक संस्थानमा सबै पछि सबै स्कूलहरू व्यावहारिक रूपमा आफ्नो समय बिताउँछन्। साथै, धेरै स्कूलहरू ढीला कपालहरू संग कक्षाहरूमा देखा पर्न मनाईन्छ। आजदेखि नै सबै विद्यार्थीहरूले सरल शैलीमा लुगा लगाउँछन्, उनीहरूको टाउकोमा कपाल उपयुक्त हुनुपर्छ।
यस लेखमा, हामी तपाईंलाई सुन्दर र रोचक स्कुलका बालबालिकाहरु को विभिन्न प्रकारका बालहरुको साथमा केहि प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछौं, जुन तपाईले आफ्नो छोरीलाई पाठको लागि बसाल्दा फाइदा लिन सक्नुहुनेछ।
प्रत्येक दिन लामो र मध्यम बालको लागि लाइट स्कुलको क्यान्सर
निस्सन्देह, लामो र मध्यम कपालको लागि सरल सरल हेराडो "ponytail" हो। केही केटीहरु र उनीहरुका मातृभाषाहरु एक थोपा अधिक जटिल कपाल को रुचि गर्छन - एक रूसी घोडा या स्पाइकलेट।
यी व्यापक फैलावटहरू विविधीकरण गर्न थुप्रै तरिकाहरू छन्। त्यसोभए, कुनै पनि टगलले ट्रोइटिचको साथमा बाँध्न सकिन्छ र यदि चाहियो भने टाउकोको छेउमा राखिएको छ, विशेष पिठका साथ कपाल फ्याँकिन्छ र सुपर बलियो तयारीको भाँडा। साथै, कर्ल दुई वा बढी तारहरू विभाजित गर्न सकिन्छ, जसका प्रत्येक मध्ये एक चोटीमा पूर वा चोटीमा उडाइन्छ र उज्ज्वल रिबन वा बिरुवाहरू संग सजाय गरिन्छ।
वरिष्ठ विद्यार्थीहरूले ऊनको साथ ऊनलाई मनपराउन सक्दछन् , जुन सुन्दर स्टाइलिश देखिन्छ। यस क्यान्डस्टाइल प्रदर्शन गर्न, यो माथेको साथ केहि निश्चित भाग अलग गर्न र कपाल कपाल बनाउनु आवश्यक छ। दिएको वांछित आकार कर्ल गर्नु, तिनीहरू एक पूरै भेला हुनुपर्दछ र सानोसँग निश्चित हुनुपर्दछ, तर तल्लो लोचदार ब्यान्ड। त्यस पछि, धीरे बाल को एक सानो कपाल को बाहिर खींचें र यसलाई पूंछ को आधार संग लपेटें, र यसको लिपस्टिक लोचदार को नीचे छ।
विभिन्न विविधताहरूमा, पूरै र यसको मोटाईको उचाई यहाँ समायोजित गर्न सकिन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईं केहि साना तारहरू छोड्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई कर्लिंग रोडको साथ कर्ल गर्नुहोस् र तपाईंको माथेको वरिपरि राख्नुहोस्।
अर्को असाधारण साधारण विकल्प, जो केश र दृष्टान्त दिन्छ, एक साधारण बन्डल हो। यो कम वा उच्च, सजिलो वा कर्ल हुन सक्छ। यस्तो कपालमा, तपाइँ सधैँ कुनै अतिरिक्त तत्त्व बनाउन सक्नुहुन्छ जसले छविलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ। उदाहरणका लागि, दुईवटा फरक रंगका रेशम वा साटन रिबनले पूर्णतया विरूद्ध मूड सिर्जना गर्न सक्छ, यदि यो कपालको जवान सुन्दरतामा मुछिएको हुन्छ।
यस्तो विद्यालयको बालबालिका आदर्श उच्च विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागि अनुकूल छन्, किनभने किशोर केटीले उनीहरूलाई आमा वा दादीबाट मदत गर्न बिना सजिलै आफैले आफूलाई प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
मैले विशेष अवसरको लागि कस्ता कपाल पसलहरू बनाउन सक्छु?
प्राथमिक विद्यालय विद्यार्थीले मध्यम-लम्बाइको कपालको लागि, तपाइँ निम्न साधारण केशस्टाइल बनाउन सक्नुहुन्छ जुन विद्यालयको छुट्टीको लागि एकदम सही छ:
सबै कपालहरू सिधा विभाजनमा विभाजित हुन्छन्, दुई पक्षले एउटै मोटाईको2वटा ढोकाहरू र सानो रबड ब्यान्ड साथ जगेडा गर्दछ।
प्रत्येक पूरै बहादुरले कडा चोटीमा।
एक सुन्तला अन्य मा धागा छ कि यस प्रकार को टाउको मा केटी एक आंकडा आठ हुन्छ। एकै समयमा, मजाकिया साना छोटोहरू कानका आसपास ढोका हुनेछन्।
सानो आकारको उज्ज्वल बहादुरहरूसँग तपाईंको कपाल सजाउनुहोस्।
लामो र मोटो कर्लको आनन्दित मालिकको लागि, तपाईं एक मोटो र कडा रूसी काढो काट्न सक्नुहुन्छ र टाउको जस्तै सम्पूर्ण लम्बाईको लागि सिरको वरिपरि लुकाउन सक्नुहुन्छ। यो केशले अरूको लागि प्रोमको लागि राम्रो छ र गाढा कपालहरूमा राम्रो देखिन्छ।
किशोरहरूको बारेमा अमेरिकी हास्य
14 बर्षको लागि केटाको उपहार
12 वर्षको उमेरमा किशोरहरुको लागि भिटामिन
किशोरका लागि खेल्ने खेल
किशोरहरूको अधिकार र जिम्मेवारीहरू
वरिष्ठ हाई स्कूल पोर्टफोलियो
स्कूलमा बच्चाको अधिकार
विद्यालयमा स्वास्थ्य-संरक्षण प्रविधिहरू
किशोर केटीहरूको लागि स्प्रिंग जूता
युवाहरूको देशभक्त शिक्षा
कसरी स्टम्पहरू मा ओइस्टर मशरूम बढाउने?
जनी डिपप र अरू ताराहरू छोटो फिल्म निर्देशक-अमितालामा खेले
कपडामा ब्रह्माण्ड शैली
12 रङ मानहरू: तिनीहरूलाई कसरी इन्टरनेटमा प्रयोग गर्ने
एक्स्ट्रास्ट्रस्ल - लक्षणहरू र उपचार
महिलाहरूको लागि व्यवसायिक कपडा
लामो डेनिम स्कर्ट
डचाको लागि आफ्नै हातले विकर फ्रान्सेली
फोम प्लास्टिकको शिल्पहरू आफ्नै हातले
के हो भने कुनै ovulation छैन?
Weinstein को मामला मा रेनी Zellweger, चार्लीज थेरेन र जेनिफर लॉरेंस ले भन्यो
एक ब्राजील मा एक shish kebab कसरि ठीक तरिकाले तलना गर्न को लागि?
अचानक रात मृत्युको सिन्ड्रोम
केट मिडलेसनले प्रशंसकहरूलाई अद्भुत मूडको साथ आइतबार सेवामा प्रभावित पारेको छ
आफ्नो हातमा शीर्षरीरीको लागि बल
राज्य सेवा मार्फत पासपोर्टको लागि कसरी आवेदन गर्ने?
एलिजाबेथ ओल्सन पहिलो पटक नयाँ प्रेमीसँग रोबी अर्ननेटसँग देखा पर्यो
डुबली - हरेक स्वादको लागि आटा र मूल बर्तनको लागि व्यञ्जनहरु!